Impiry i TDF no nandresy tamin'ny mpitaingin-tsoavaly iray izay tsy mba nanao ilay akanjo mavomavo mavo hatramin'ny farany? - Tour De France
Tena > Tour De France > Nandritra ny asany de tour de france, impiry impiry i Eddy merckx no nanao ilay akanjo mavomavo? - valiny amin'ireo olana
Nandritra ny asany de tour de france, impiry impiry i Eddy merckx no nanao ilay akanjo mavomavo? - valiny amin'ireo olana
Impiry i TDF no nandresy tamin'ny mpitaingin-tsoavaly iray izay tsy mba nanao ilay akanjo mavomavo mavo hatramin'ny farany?
indroany Tourdia nandresyavy amin'ny racer izaytsy nanao ilay akanjo mavomavo mavo raha tsyny hazakazakadiatapitra. Tamin'ny 1947, Jean Robic dia namadika deficit telo minitra tamin'ny dingana farany 257 km nankany Paris.
Ny Tour de France dia hazakazaka boribory marobe isan-taona izay any Frantsa no voalohany ary mandalo any amin'ireo firenena akaiky. Natao nandritra ny 3 herinandro ny volana jolay, fitsapana maharary ny fiaretan'ny zanak'olombelona manodidina ny 3.500 km mihoatra ny dingana 21 sy karazana tanety isan-karazany izany, raha jerena amin'ny fomba fijery, izany dia ny halaviran'i Londres ka hatrany Tel Aviv, New York ka hatrany Las Vegas, na Melbourne, Aostralia ka hatrany PerthNy tantaran'ny hazakazaka dia nanomboka tamin'ny 1903 rehefa nanolotra ny hevitra momba ny hazakazaka am-bisikileta ho an'ny mpampanonta azy Henri Desgrange i Géo Lefèvre, mpanao gazety mpitaingina bisikileta L'Autos, 26 taona, mba hampiroborobo ny gazety sy ny mivezivezy hitombo. Tian'i Henri ilay hevitra, ary ny hazakazaka fanokafana dia natao nandritra ny 19 andro, nanomboka ny 1 ka hatramin'ny 19 Jolay ny mpihazakazaka dia nahasarika mpandray anjara 60, izay samy nizara ny vola valisoa 20 000 franc. 6.075 amin'izy ireo no nankany amin'ilay nandresy voalohany, Maurice Garin.
Tonga tao Paris efa ho adiny telo i Garin taorinan'ny filoham-pirenena Lucien Pothier. Ary efa ho 65 ora talohan'ny mpandray anjara faha-21 sy farany tamin'ny famaranana. 21 amin'ny 60 mpamily ihany no nahavita ny hazakazaka fanokafana.
Ny toetra mampivarahontsana ny fitsidihana dia efa fantatra mialoha. Amin'ny lafiny iray, ny hazakazaka dia nandreraka kokoa noho ny amin'ny maoderina. Nandeha bisikileta teny amin'ny làlambe tany Frantsa andro aman'alina ireo mpandray anjara tamin'ny bisikileta mifono vy.
Ny fitsidihana voalohany dia nisokatra ho an'izay te-hifaninana. Ny ankamaroan'ny mpamily dia nalamina tamin'ny ekipa. marika bisikileta mifandraika izay nikarakara azy ireo.
Ireo mpandray anjara tsy miankina dia nantsoina hoe 'Touriste Routiers' - mpizahatany an-dalambe. Ary navela handray anjara izy ireo, raha toa ka tsy nitaky ny fangatahan'ny mpikarakara. Ny sasany amin'ireo mpilalao maroloko indrindra amin'ny Tours dia Touriste Routiers.
Tsy nisy toerana ho an'ny olona tao amin'ny Tours taorian'ny taona 1930, ary nanjavona be ny Touriste Routiers tany am-boalohany, na dia ekena ho ekipa bisikileta rezionaly natsangan'ny fitsidihana faha-2 an'i Henri Desgrange tamin'ny 1904 aza, dia nilaozana koa ny mitaingina rehefa nisoloky tamim-pitokisana izy tsy mahita ny mpitaingina. Izany dia nampihena ny halaviran-toerana isan'andro, fa ny fifantohana kosa dia nijanona hatrany. Desgrange dia nilaza fa hazakazaka mafy ny hazakazak'izy ireo ka mpamily iray ihany no tonga any Paris.
Ny toetran'ny hazakazaka dia nitaky ny eritreritry ny besinimaro ary ny hazakazaka dia natao isan-taona hatramin'ny fanontana voalohany tamin'ny 1903, afa-tsy rehefa najanona ho an'ny WW2. Rehefa nalaza sy malaza ny dia dia nitarina ny hazakazaka ary nanomboka nitatra nanerana an'izao tontolo izao ny mpihazakazaka rehefa niditra ny hazakazaka isan-taona ireo mpitaingin-tsoavaly. Androany ny fitsidihana dia hetsika UCI World Tour, izay midika fa ireo ekipa mandray anjara amin'ny hazakazaka dia ekipa matihanina UCI avokoa ankoatry ny ekipa asain'ny mpikarakara.
Ny fanontana maoderina an'ny Tour de France dia misy fizarana na dingana 21 andro natao tao anatin'ny 23 andro. Na dia miova aza ny làlan'ny Tour de France maoderina isan-taona dia mitohy ny faharetan'ny hazakazaka, ary ny mpandresy amin'ny farany dia ny bisikileta manana fotoana ambany indrindra amin'ny karazana sokajy sehatra 3 samihafa. Anisan'izany ny fitsapana fotoana.
Izay ifaninananan'ny bisikileta tsirairay avy amin'ny famantaranandro amin'ny bisikileta sy fitaovana aerodynamika. Dingana fisaka: Matetika haingam-pandeha? . ? Fizarana mamakivaky ny ambanivohitra frantsay.
Ary ny ambaratonga an-tendrombohitra: izay manodidina ny Pyrenees sy ny Alpes ary mahaforona ny faritra sarotra indrindra amin'ny fitsidihana. Ny dingana rehetra dia refesina hatramin'ny farany. Ny fotoana kendrena ataon'ny mpamily dia ampiana amin'ny ora taloha.
Ny mpamily manana ny fotoana feno farany ambany indrindra no mpitarika ny hazakazaka ary avela hitafy ilay akanjo lava nolokoana. Na izany aza, ny tompon'ny akanjo mavo mavo dia afaka miova mandritra ny hazakazaka arakaraka izay mitarika amin'ny faran'ny dingana tsirairay. Ny mpandresy farany dia ny mpamily izay homena ny akanjo mavomavo amin'ny faran'ny dingana farany amin'ny hazakazaka izay natao isan-taona hatramin'ny 1975 tao amin'ny Champs-Élysées any Paris.
Fa maninona no akanjo baoty mavo? “Eny, ny original L'Auto dia navoaka tamin'ny takelaka mavo matanjaka, manome fomba hampiroboroboana ny gazety tamin'ny andro voalohan'ny tantaran'ny hazakaza-tsoavaly. Saingy ny akanjo mavomavo mavo, fantatra amin'ny anarana hoe 'Maillot Jaune', dia tsy izy irery ihany no nanao ilay akanjo. Na dia mahasarika ny saina indrindra aza izy io satria omena ilay mpandresy amin'ny ankapobeny.
Misy fanasokajiana na fifaninanana hafa ao anatin'ny fitsangatsanganana .ny ankamaroany miaraka amin'ny akanjon'izy ireo manokana. Ny jersey maintso na 'Maillot Vert' dia maneho ny hazakazaka sprinters tsara indrindra.
Ny akanjo polka dot dia mamaritra ny mpihanika lalana tsara indrindra amin'ny hazakazaka. Ny akanjo ba fotsy dia mamaritra ny toerana tsara indrindra amin'ny laharana ankapobeny ho an'ireo tanora 25 na tanora. Ankoatr'ireo akanjo lava miavaka ireo dia tsy maintsy mitafy akanjo mitovy ihany ireo mpitaingina ny ekipa 21-lahy.
Ny ekipa lobaka ekipa tsirairay dia mitondra ny famantarana ny mpanohana izay mandoa ny karaman'ny mpamily. Akanjo manokana ny mpamily sasany. Ohatra, ilay tompon-daka eran'izao tontolo izao dia mitafy ny ekipany, fa amin'ny akanjo ba sosialy misy fehiloha miloko.
Ireo tompon-daka amin'ny làlam-pirenena amin'izao fotoana izao dia manao akanjon'ny ekipa miloko amin'ny lokon'ny fireneny. Miaraka, ireo mpitaingin-tsoavaly rehetra ireo miaraka amin'ny akanjony samihafa dia mamorona kaleidoscope misy loko mihetsiketsika amin'ny kodiarana izay antsoina hoe 'Peloton antsoina hoe peloton'. Ary ny sarin'ny peloton dia mamakivaky ny ambanivohitra frantsay sy tendrombohitra mahafinaritra
Faritra izay manao ny Tour de France ho iray amin'ireo fampisehoana mahafinaritra indrindra eto an-tany. Saingy ny peloton dia tsy natao hijerena endrika ivelany fotsiny ary manompo tanjona tena ilaina amin'ny fitehirizana ny herin'ilay mpitaingina azy. Izany dia satria ny peloton dia mampihena ny fiovan'ny endrika mba hanovana endrika hamahana ny dian-drivotra, ny dian-tànana ary hiatrehana ny fitsangatsanganana amin'ny rivotra sy ny tadin'ny rivotra.
Paikady fantatra amin'ny hoe fandrafetana. Ny mitaingina eo afovoan'ny vondrona mandroso tsara na mpitaingina bisikileta peloton dia afaka mamonjy angovo hatramin'ny 40 isan-jato. Saingy ny Tour dia tsy afaka mandresy amin'ny fanaovana de France na fanaovana ny iray amin'ireo pataloha miloko tadiavina amin'ny alàlan'ny mitaingina peloton fotsiny.
tombo-tsoa azo avy amin'ny kolikoly zavokà
Indraindray ny mpamily dia tokony hiala amin'ny fonosana raha te-hanatsara ny laharana ankapobeny amin'ny hazakazaka. Rehefa misaraka ny vondrona dia miova ny paikady famolavolana, ka miteraka ilay fantatra amin'ny tsipika roa sosona. Io no ahafahan'ny tetikady ekipa manomboka.
Ohatra, raha ny mpiorina dia maherin'ny mpitaingina ekipa izay ekipa iray na ekipa hafa no betsaka, ireo mpitaingina izay tsy mifampitady fandrahonana dia afaka miara-miasa am-pahombiazana izy ireo hanalavirana ny tenany amin'ireo peloton sy mpifaninana mpifaninana aminy. Na izany aza, raha misy mpitaingina ekipa mpifaninana na fandrahonana amin'ny filaharana ankapobeny ny any ivelany, dia afaka miasa ireo mpitaingina mibaiko azy ireo, mamehy azy ireo na manakana azy ireo. Raha ny marina, ny Tour de France dia hetsika iray isam-batan'olona amin'ny heviny fa manindry ny pedal-ny ny tsirairay mba hiatrehana ilay lalana.
Ny fandresen'ny tsirairay ny mpitaingina dia farafaharatsiny farafaharatsiny, vokatry ny mpiara-miasa tsy tia tena. Mahalana ny mpitaingina bisikileta no mandresy sehatra nefa tsy fantany ireo mpiara-miasa aminy izay nahatonga azy hitaingina fandresena tamin'ny asan'ny ampondra, izay ahafahan'ny mpitarika azy mivelona na, indraindray, mba ho tafavoaka velona tsotra izao. Midika izany fa ny famoahana rano sy kojakoja ivelan'ny fiaran'ny ekipa dia ento mivezivezy.
Na ny famoronana slipstream amin'ny alàlan'ny fandaniana fotoana be dia be amin'ny lohan'ny peloton dia mety hidika akory hoe mihodina sy mametaka tendrombohitra mba hahazoana mpiara-miasa voadona ary hamerina azy amin'ny ady. Ary mety hiteraka ilay antsoina hoe vaky. Famakiana, na famelezana ny rindrina, no mitranga rehefa reraka tanteraka ny mpamily ary tsy manan-kery intsony hanohizana.
Raha vaky ny mpamily dia mety hianjera be eny an-kianja izy, very fotoana sarobidy ary amin'ny tranga sasany dia miala tanteraka amin'ilay hazakazaka. Betsaka ireo mpitari-dalana ao amin'ny Tour de France no namoy tanteraka ny valin'ny fizahan-tany, noho izy ireo namaky ny tampon'ny tendrombohitra. Raha ny marina, ny fotoana mampientanentana indrindra amin'ny hazakazaka dia matetika rehefa misy mpamily roa miady amin'ny fitarihana ankapobeny amin'ny fitsangatsanganana, miakatra ny fiakarana an-tendrombohitra, mifampitsapa ara-tsaina sy ara-batana ny tsirairay ary manandrana manery ny iray hafa hamaky.
Ka tsy mandeha intsony ny filazanao fa tokony ho mendrika tanteraka amin'ny Tour de France ianao. Manam-pahaizana maro no manamarina izany ho ny sarotra indrindra amin'ireo hetsika ara-panatanjahantena lehibe rehetra sy ireo mpandray anjara mandoro hatramin'ny kaloria 7.000 isaky ny dingana. Tadidio fa mandoro kaloria 2000 isan'andro ny salan'isa.
Ny tahan'ny fo dia mety hahatratra fetra mampidi-doza na dia amin'ny fiakarana aza. Inoana fa ny fon'ny nahazo an'i Tour de France, Miguel Indurain, dia 50% lehibe kokoa noho ny salan'isa ary manana tahan'ny fony miala sasatra 28. Ny salan'isa dia 60 ka hatramin'ny 90. Tamin'ny faran'ny taona hazakazaka hazakazaka, izay mety haharitra adiny efatra ka hatramin'ny enina, ny bisikileta dia tsy maintsy mandresy ny havizanana ara-tsaina sy ara-batana mafy mba hitazomana ny hafainganana mihoatra ny 60 km / ora mandritra ny 5 ka hatramin'ny 10 km farany amin'ny hazakazaka.
Hafainganana haingana 75 ka hatramin'ny 80 km / ora eo amin'ny tsipika fahatongavana. Fa ankoatry ny maha mpanao fanatanjahan-tena ambony anao ary mila mahafehy ireo fanamby ara-batana sy ara-tsaina amin'ilay hazakazaka. Miaraka amin'ny ekipa tsara aorianao.
rahoviana no mandeha ny bisikileta
Ianao koa dia mila vintana kely ary manana ny tadin'ny steas, misy loza marobe izay mety hanova ny nofinofin'ny mpitaingina ny fandresena ny Tour ho nofy ratsy. Ohatra, ankoatry ny mpamily 198 hafa amin'ny hazakazaka, izay matetika mety hitarika fiangarana betsaka. Saika betsaka ny fiara izay mamorona lamasinina lava mpanohana, mpikarakara firazanana ary haino aman-jery.
Tsy lazaina intsony ny fihazakazahana midina, izay ahafahan'ny mpitaingina mahatratra efa ho 80 km / ora, izay ny slip na fahadisoana kely indrindra dia mety hitarika fianjerana mampidi-doza. Avy eo dia misy mpijery 12 ka hatramin'ny 15 tapitrisa izay milahatra amin'ny arabe amin'ny Tour de France ho somary be zotom-po indraindray. Tonga ihany ny toetr'andro.
Ny orana, ny havandra ary na ny lanezy aza any an-tendrombohitra dia mety hanoratra andro ratsy mety hitarika fianjerana na hatsiaka mety hanimba ny vintana ary ny masoandro koa mety hitarika tsy fahampian-drano maharitra sy harerahana. Ka hitanao fa be dia be ny Tour De France amin'izany. Fa izany rehetra izany dia mahatonga ny iray amin'ireo hetsika ara-panatanjahantena mahavariana sy tsy hay hadinoina ary ny endrik'ity planeta ity.
Iza no nanao ny akanjo lava mavo?
Misy akanjo marobe eto amin'ny tontolon'ny bisikileta, saingy azonao atao ve ny miantso azy rehetra? Fantatrao ve fa pataloha jeans Amalia Rosa anao manokana aho? Amin'ity lahatsoratra ity dia hitety anao aho amin'ny sasany amin'ireo akanjo malaza indrindra amin'ny tontolon'ny bisikileta, inona no soloin'izy ireo ary aiza? Izy ireo dia avy taminay Nanomboka tamin'ny akanjo lava malaza indrindra amin'ny bisikileta na dia ireo tsy mandeha bisikileta aza dia hahafantatra fa ny mpitarika ny Tour de France dia hanao ilay akanjo mavomavo. Akanjo ity izay nofinofisin'ireo mpitaingina bisikileta matihanina sy natokany ho an'ny Tour de France Leading Jersey ary toy ny mahazatra, ny ankamaroan'ny hazakazaka lehibe dia azo, toy ireo sokajy jersey maro hafa. Izany dia tamin'ny 1919, rehefa ny Tour deFrance, taorian'ny fiatoana naharitra efa-taona, dia nankalaza ny fiverenan'ny roa ampahatelony tamin'ny vanim-potoana 5560 kilometatra sy ny dingana 325 kilometatra, nanapa-kevitra ny talen'ny hazakazaka Onritu Fitsarana fa ny mpitarika ny ny hazakazaka dia tsy maintsy niavaka tamin'ny mpifaninana hafa ary talohan'ny nanombohan'ny dingana roa tamin'ny 18 Jolay 1919, i Christophe avy any France dia nanao ny akanjo mavomavo voalohany, fa tamin'izany fotoana izany dia fomba iray fotsiny hanamarihana ny talen'ny hazakazaka, saingy ity fotoana ity dia nivadika ho iray amin'ireo akanjo bisikileta malaza indrindra, saingy ny antony nisafidianana ny loko mavo satria loko mpanohana ny gazety hitazonana ireo andro ireo fa tsy ny akanjo ihany no hanaovan'ireo ekipa mavo ireo manana fiarovan-doha bisikileta mavo sy kojakojam-bisikileta rehefa mitafy ny akanjo mavomavo mavo ny iray amin'ireo mpitaingina azy, ilay zazalahy Jersey Insight no hamantarana azy manaraka ary raha ny fahitako azy ny tena milay dia ilay akanjo polkadot, fantatra ihany koa amin'ny hoe King of the Mountains Jersey isaky ny fiakarana manan-danja rehetra e Tour dia misy teboka eo an-tampon'ny tampon'isa, fa arakaraky ny mihasarotra ny fiakarana no ahazoana isa bebe kokoa, izay ny isa betsaka indrindra dia eo am-piandohan'ny andro amin'ny maraim-be dia efa nisy ny fanamiana tototry ny fanamoriana ny tendrombohitra hatramin'ny 1933, saingy tsy nisy jersey Tamin'ny taona 1975 vao nomena ny akanjo fotsy misy polkadots mena fa maninona ny teboka polka no tsy misy ifandraisany amin'ny van teenswell izany dia noho ny iray amin'ireo mpanohana schokoladenpool izay handrakotra ireo bongo sôkôla amin'ny polkadots sy ny polka dot jersey tonga manaraka Izay laharana maitso maitso ilay akanjo maintso fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe Mein Over tamin'ny Tour deFrance tamin'ny 1952, ny gadona fandikana haingana indrindra nandresen'i margin lehibe toy izany dia nijanona avokoa ka nisy ny famporisihana fanampiny nampidirin'ny mpikarakara ny akanjo maintso ny jersey sprint toy ny mpitaingin-tsoavaly polkadot manangona pirinty amin'ny zotra, fa tsy any an-tendrombohitra amin'ity indray mitoraka ity mandritra ny fidirana an-tsehatra sprint afovoany, fa nisy isa kosa nomena tamin'ny famaranana, ka nanapa-kevitra ny mpikarakara ny hankalaza nihinana ny tsingerintaona faha-50 tamin'ny 1953 niaraka tamin'ny jersey maintso sy ny lokony, mety ho iray amin'ireo mpanohana ara-dalàna ny fitsidihana mitondra ny anarana Sardinia Ny akanjo fotsy, fantatra ihany koa amin'ny hoe MayanBlanc, no tena akanjo mavomavo fa ho an'ireo tanora mpitaingina azy ity ny lobaka ho an'ny laharana ambony ambanin'ny 25 santimetatra ny fanasokajiana ankapobeny Tamin'ny taona 1975 no nampiasana voalohany ny akanjo, fa ho an'ireo mpitaingina ihany tao anatin'ireo telo taona voalohany tamin'ny hazakaza-pitia, avy eo tamin'ny 1983 dia novana ho mpamily voalohany ihany izay azo ekena, ary tamin'ny 1985 dia natolotra ho an'ny mpamily latsaky ny 25 ny jirobe nanomboka ny taona 1989 ka hatramin'ny 1999, saingy tamin'ny taona 2000 dia niverina izy io ary efa nisy hatramin'ny naha-jirika voalohany ny mavokely Giro themaglia mavokely. , fa mavokely izy ary ny loko mavokely dia avy amin'ny gazety fanatanjahan-tena italiana iray, izay nanome famatsiam-bola ny hazakazaka ary natao pirinty tamin'ny taratasy mavokely mifanohitra amin'ny akanjo rehetra amin'ny jubilation dia mbola nitovy hatrany ny akanjo mavokely hatramin'ny loka voalohany tao amin'ny jiro Giro ny volon'ondry volomparasy dia ilay jersey sprinter indray mitovy amin'ny jersey maitso amin'ny Tour de France fa volomparasy Tamin'ny 1967 dia nampidirina niverina ilay jersey sprint avy eo jersey mena ary tamin'ny 1969 dia nanapa-kevitra ny mpikarakara handoko ny volomparasy volomparasy ary volomparasy mandra-pahatongan'ny 2010 raha nanapa-kevitra ny mpikarakara ny hanova azy amin'ny jersey mena fa tamin'ny 2017 dia novain'izy ireo fa miverina amin'ny lilajesse Ilay jersey manga, fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe Lea Asura, no akanjo tsara indrindra miakatra, izay mitovy nefa tsy mitovy amin'ny an'ny Jersey polkaDot ao amin'ny Tour de France.
Ity no lobaka an-tendrombohitra ho an'ny Giro tamin'ny 1974, ny Jersey no voalohany nomena indray mandeha ary niverina avy eo maitso hatramin'ny 2012 rehefa nanavao ny mpanohana ilay mpanohana ny jersey Bangkamedal Alaun, banky italiana ary nivadika ho manga indray de tsy foana toy izany, rehefa nanomboka ny taona 1931 ny hazakazaka dia volomboasary ary avy eo tamin'ny 1941 dia navadika ho fotsy nandritra ny herintaona ary avy eo niverina teo amin'ny volomboasary aho tamin'ny 1955, avy eo nivadika mavo, mitovy loko amin'ny tour de France sy nijanona mavo foana izy hatramin'ny taona 1999, ankoatra ny tamin'ny 1977, rehefa nivadika volomboasary izy, ny akanjo mena dia noraisina tamin'ny taona 2010, ny akanjo avana dia akanjo lava mampiavaka ny tontolon'ny bisikileta ary nofinofisin'ireo mpitaingina bisikileta matihanina Winn Jersey. natolotra ho an'ny mpitaingina izay mandresy amin'ny hazakazaka tompon-daka eran-tany amin'ny taranja bisikileta marobe tsy mitovy amin'ny akanjo manao akanjo lava mandritra ny hazakazaka, ny akanjo lava avana dia tonta mandavantaona ary hanana mpandresy amin'ny hazakazaka mandra-pahatongan'ny fiadiana ny tompondaka manaraka sy hiverina Ny fahaizan'ny fanaovana ny tadin'ny avana amin'ny akanjonao na amin'ny vozon'akanjo na amin'ny tanany. Tamin'ny taona 1927, ny akanjo avana dia nampidirina ho toy ny ekipa T fotsy miloko fotsy nateraka hatrany ambany ka hatrany amn'ny fandrarana UCI fa ny loko miloko mavo mainty mainty mena dia miloko ihany koa ireo perla olympika Maro ny zava-miafina manodidina ny fiandohan'ny akanjo avana fa ny ny loko tany am-boalohany dia noforonin'ny mpanorina ny hetsika olympika Baron Pierre de Coubertin Okay, tsy jersey ity, ity dia ampahany lehibe amin'ny Tour de France izao ary loka tsy ofisialy izay nomena ny mpitaingina farany napetraka. Amin'ny ankapobeny, ny anarana dia avy amin'ny lanterne mena izay nahantona tao ambadiky ny kalesy izay tadiavin'ilay mpiantso raha te hahita raha tapaka ny lamasinina hafa.
Antenainay fa nankafizinao ity fihaonan'ny sasany amin'ny akanjo malaza indrindra amin'ny tontolon'ny bisikileta ity, fa inona ny akanjo itiavanao azy? Maninona ianao no tsy mandeha amin'ny app gcn ary milaza hoe inona no akanjo manaingo bisikileta tsara indrindra ary maninona ary teo no nipoitra ny teboka polka hmm hmm tamin'ny taona 1975 no nampiasaina voalohany ny jersey fa ho an'ny mpitaingina ihany izany tao anatin'ny telo taona voalohany ny hazakazaka Professional tamin'ny 1973 1983
Ohatrinona ny lobaka mavo misy an'i Lance?
Ilay mpitaingina izayefa nanao ny akanjo lava mavo dia nyEddy Merckx belza, izananaoizany 96 andro. Ny isan'ny mpitaingina betsaka indrindra mankanyanaovan'ireonyjerseyamin'ny fanontana tokana an'ny Le Tour de France dia valo, izay nitranga tamin'ny 1958 sy 1987.
rotor 3d crank famerenana
Um andao isika hankany amin'ny tobin-tsolika ary hisotro zava-pisotro na hitsaboana na zavatra hafa aloha - tsara ve izany? Tsy tsara ho ahy izany.- Tsy mety aminao izany? Ho an'ny sakafonao? - Eny - mila mihinana tsara kokoa ianao? Inona no ilainao? Ohatra hoe sakafo organika? - Mila mofomamy na lollipop aho.
Tsy maintsy mandeha any amin'ny trano fidiovana aho, azonao atao ve izany? - Rano, Gatorade: tsy misy zavatra tsara. Tsara izany, andao jerena eto ity tifitra ity. Tsara izany, Andriamatoa
Na dia tsara jerena aza ilay sombin-javatra, dia misy zavatra mety tsy noraharahinao. Inona no mety tsy hitanao, Lincoln? - Nesorina tanteraka ny sainako satria tsy nesoriko izy ary naveriko tao amin'ny fiandohan'ny lalao. Teo am-pelatanan'izy ireo tanteraka ny tanany ary nivaha izy io satria tsy nisy nahazo. - Mahagaga ihany ny lalao, ny marina dia mpisoloky i Lincoln - mpisoloky i Lincoln - amin'ny baolina kitra Nahatafiditra azy tamin'ny ekipa NFL sasany izy ary nandresy.
Angamba isika hanomboka fironana vaovao, hipetraka amin'ny fiaramanidina ary hiandry mandrakizay mba hivoahan'ny tsirairay. Mahafinaritra izany - Toy ny mahazo kilasy voalohany isika ary eo amin'ny seza roa eo aloha isika - Ary miandry 20 minitra - Eny - Ka tonga tany Minneapolis izahay, tsy maintsy mandeha any Boston izao, manana fotoana maharitra. Ka antenaiko fa mankafy an'ireto clip ireto ianao.
Tsy te hanao an'izany izy rehetra. Aza omena fotoana be loatra aminy. Na dia omeko fotoan-tsarotra aza izy, ary angamba homeko anaram-boninahitra ity zanako lahy ity hoe mpamitaka ny zanako lahy.
Marary fotsiny aho ary fantatrareo, ny kitrokelin'ny tongotra tahaka izany. Fa nitsambikina fotsiny ilay lehilahy aho. (Milalao mozika afovoany) (mihoby ny mpanatrika) - Ataovy eo amin'ny tavanao ny tananao, # 56 manafika.
Misafotofoto be ianao izao - Miverena any amin'ny Footlocker! - Miverena any amin'ny Footlocker, hoy ilay tovolahy. Tokony ho tia mpankafy soccer ianao. Ity i Mattix - Salama - Manana fantsona YouTube izy ary vao avy naka sary anay tamin'ny fantsona YouTube-ny ​​izy.
Handeha handeha tongotra izahay, tiako haseho ireo tovovavy manodidina ny kianja. Misy io lalambe io izay miakatra hatrany. Ka nieritreritra aho fa milay ny fampisehoana azy ireo - Ary tongasoa eto an-tsena indray izahay, BYU Cougars anay! - Tsara izany - Tiako ity kianja ity, jereo ny tendrombohitra eo.
Tsia, Sean Duras eto. Tsy manao izany izy - tsy mpanafatra baolina kitra goavambe izy na dia, aza ny zava-nisy nahafinaritra dia nilalao baolina kitra izy tany amin'ny lisea. - Marina izany. - Mahitsy? (milalao mozika elektronika faly) Mahery setra ireo mpandahateny eto - Harvey Langi, mpitatitra baolina - Nahazo izany ve ianao? Henonao ve hoe iza ilay mpitatitra baolina? - Fonosin'i # 21, Curry Bailey Smith - Tena mafy be izany.- Tombony amin'ny iray Ao amin'ny sombin-kazo no ahazoantsika ny faharoa sy fahasivy.- Misy ireo mpandahateny fanamafisam-peo, eo indrindra! - .. inona no dikan'ny herinaratra aminao? - Tena mafy be izany. (mitohy ny mozika falifaly) - Fa maninona no mbola apetrakao amin'ny tavoahangin-drano ny fakantsary? - Nanandrana nanao prank ahy fotsiny i Lincoln ary nilaza ny fakantsary - tsy fantatro akory izay atao hoe prank.
Voalohany indrindra, ny laharan'ny efitranontsika dia 534 ary misy zana-tsipìka, - Tahaka ny fanary fambara - ary antsika irery io. 534. Mahazo ny isantsika manokana isika amin'ity sy ity ary lazao, lazao, inona izany? - The Orient Heights Suite - Inona ilay Orient? - Akondro - Tena tsy fantany fa nanontany ahy izy hoe: 'Inona no atao hoe Atsinanana?' amin'ireo toerana rehetra ireo.
Vao avy nahavita ny baolina kitra BYU ianao dia nahazo ny hotely nasehonay teto B oston izahay. Mamatonalina - andraso, zavatra baolina kitra BYU? - Ie, nasehoko azy ireo ny baolina kitra BYU - aiza? - Ny VLOG. Nasehonay anao fa mpisoloky ianao - Eny.
Nisy nahazo ny jersey 4 rehetra ve tao Tour de France?
SpearArmstrong 'tena' mbolamananaFitolobaka mavoaseho.
Mathieu van der Poel dia nanamafy ny toerany manerantanybisikileta lehibe indrindrataorian'ny fandreseny tamin'ny Stage 2 tao amin'nyTour de France. Izany dia hoy i Sir Bradley Wiggins. Nahazo fahalalam-pomba tamin'ny fitsangatsanganana an-tampon'ny fiakarana avo roa heny tao Mur- ny DutchmanFrom-Bretagne haka ny jersey mavo.28. 2021.
Mahazo mitazona ny akanjo baoty mavo ve ny mpitaingina azy?
Ny malaza indrindra dia nyjersey mavo, fa misy koa maitso, fotsy ary teboka polkajerseynomena isan'andro. Betsaka ny olona mieritreritra fa ilay bisikileta mandresy amin'ny hazakazaka amin'io andro io no mahazo nyjersey mavo, fa DISO izany! Tsy manao izany izy ireomahazonyjerseymba handresena sehatra fotsiny.24. 2021.
Fa maninona no mavo ny lobaka mavomavo?
Ilay Tour de France malazajersey mavonanomboka tamin'ny filana. Tonga tao amin'ny hevitra izy fa na iza na iza manana fotoana haingana indrindra amin'ny dingana voatondro amin'ny hazakazaka dia hanome ajersey mavoMAVOho fanomezam-boninahitra ny gazety ara-panatanjahantena nanohana ny hazakazaka, L'Auto-V? lo, izay natonta tamin'nyMAVOtaratasy.17. 2019.
Inona no dikan'ilay akanjo lava mavo ao amin'ny Tour de France?
Ho an'ny ankamaroany, ny hazakazaka dia namboarinajersey mavo, na maillot jaune, mijoro ambonin'ny zava-drehetra, satria manondro ny mpitaingina azy izay mitarika ny fanasokajiana ankapobeny. Isaky ny dingana tsirairay dia manisa ny manam-pahefana izay manana ny fotoana haingana indrindra amin'ny hazakazaka iray manontolo.06.21.2021
FOTSY: Ityjerseydia mitaingina ny mpitaingin-tsoavaly haingam-pandeha indrindra latsaky ny 25 taona (ny 1 Janoary tamin'ny taona fifaninanana). Ny voalohanyjersey fotsydia nitafy tamin'ny 1975. Misy loka sy fifaninanana hafa ao anatin'ny Tour de France izay tsy tafiditra aoakanjo lava.09.07.2010
Inona no nataon'i Eddy Merckx tamin'ny Tour de France 1967?
Merckx dia nanokatra ny fanentanana tamin'ny 1967 tamin'ny fandresena dingana roa tao amin'ny Giro di Sardegna. Nanaraka ireo fahombiazana ireo izy tamin'ny fidirany tany Paris – Nice izay nandreseny ny dingana faharoa ary nitazona ny hazakazaka. Dingana roa taty aoriana, mpiara-miasa iray]
Firy andro i Eddy Merckx no mitazona ilay akanjo baoty mavo?
Frantsay maro no sosotra fa mety handresy ny fandresena dimy notontosain'i Jacques Anquetil ny belza iray. Merckx nitazona ilay akanjo mavomavo mavo nandritra ny valo andro, izay nampiakatra ny rakitsorany ho 96 andro, fa nandritra ny dingana faha-14 dia nisy mpijery frantsay nanindrona azy tamin'ny atiny. Ny fifandonana taty aoriana tamin'ilay mpitaingina Danemarka Ole Ritter dia nanapaka ny valanoranony.
Firy ny fandresena azon'i Eddy Merckx?
Ny ankabeazan'ny fandresen'ny kariera nataon'ny mpitaingina bisikileta matihanina: 525. Fandresena an-tsehatra indrindra tao amin'ny Tour de France: 34. Ny ankamaroan'ny fandresena tamin'ny Tour de France iray: 8, tamin'ny 1970 sy 1974 (nozaraina tamin'i Charles Pélissier tamin'ny 1930 ary Freddy Maertens tamin'ny 1976). Amin'ny ankabeazan'ny andro miaraka amin'ny akanjo mavomavo mavo ao amin'ny Tour de France: 96.